Hiran State - News: Madaxweynaha mustaqbalka Professor Warfaa oo gaaray magaalada
Madaxweynaha mustaqbalka Professor Warfaa oo gaaray magaalada
HS:-Madaxweynaha mustaqbalka Professor Warfaa oo gaaray magaalada Washington DC isagoo halkaasi ku sugnaan doono dhawrka malmood ee inagu soo aadan.
Professor Warfaa ayaa si weyn loogu soo dhaweyey garoonka diyaaradaha magaalada Washington DC iyadoo ay galbinayeen dhawr gawaarida raaxada ah oo loogu sii diyaariyey halkaasi ka hor intii aysan soo caga dhigan diyaaradii siday musharaxa madaxweynimada Somaliya Professor Ahmed Muumin Warfaa.
Professor Warfaa ayaa waxuu shirweyn ku leeyahay sida lagu soo waramayo Hotelka uu degan yahay.madaxweynaha mustaqbalka Somaliya ayaa tan iyo markii uu bilaabay ololahiisa uu ku doonayo inuu ku hogaamiyo bulshada Somaliyeed ayaa waxey u muuqataa in maalinba maalinta ka danbeysa uu sii xoogeysanayo ololahiisa musharaxnimo.
Musharaxa ayaa lagu wadaa marka uu soo gaba gabeeyo safarka uu ku joogo caasimada Mareykanka ee Washington DC inuu halkiisa ka sii wadi doono safaradii uu dhawaantan ku tagay bariga dhexe ee uu hagadka galiyey kadib markii uu Mareykanka u yimid sida lagu soo waramayo inuu halkaasi shirar muhiim ah kula yeelan doono diplomasiyiin iyo masuuliyiin kala duwan.
Hadaba sidii aad inooga barataeen hadii aad tahay muwaadin Somaliyeed oo ku nool magaalada uu joogo madaxweynaha mustaqbalka si aad u barato shaqsiga doonaya inuu ku hogaamiyo berito kala xiriir.
· admin on December 15 2011 23:27:14 · 0 Comments · 1858 Reads ·
14,605,602 unique visits